Diyaarad dad lagu soo tahriibiyay oo la qabtay Malmö - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Diyaarad dad lagu soo tahriibiyay oo la qabtay Malmö Фото: Bastien Engerbeau/Flickr
Diyaarad dad lagu soo tahriibiyay oo la qabtay Malmö
La daabacay tisdag 16 december 2014 kl 11.00
Saddex qof oo looga shakiyay in ay dadka tahriibiyaan ayaa la xidhay kadib markii diyaarad gaar ah oo ka timid caasimadda Lubnaan ee Bayruut ay fiidnimadii isniintii soo cago-dhigatay madaarka Sturup ee magaalada Malmö.
Saddexdan qof ee ay booliisku xidheen ayaa laba nin oo ka mid ahi ka soo jeedaan waddanka Masar, iyaga oo da’doodu tahay 50 jir. Halka qofka saddexaad ka yahay gabadh 20 jir oo ka soo jeedda waddanka Lubnaan. Laba ka mid ah saddexdan qof ayaa la xidhay subaxnimadii salaasada.
Maya Forstenius oo ah afhayeenka booliiska gobolka Skåne ayaa jarriiradda Sydsvenskan u sheegtay in dadka rakaabka ah ee magangalyodoonka ahi aanay danbiilayaal ahayn, sidaasi daraadeedna ay ku wareejiyeen laanta socdaalka. Sida ay booliisku sheegeen laba ka mid ah dadkan magangalyo-doonka ah laba ka mid ahi waa reer Siiriya. Kuwa xidhan ayay booliisku baadhitaan ku wadaan, waxaanay booliisku la xidhiidheen haayadda sirdoonka Iswiidhan.